သင့်ရဲ့ BROWSER မှာပိတ်ဆို့ကြော်ငြာများအတွက်အစီအစဉ်များ - PROGRAM တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း - 2019
သင့်ရဲ့ browser မှာပိတ်ဆို့ကြော်ငြာများအတွက်အစီအစဉ်များ
အင်တာနက် - အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏သိုလှောင်ရုံ။ ဒါပေမယ့်စည်းမျဉ်းအဖြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုများ၏ content နှင့်အတူကျနော်တို့တောက်ပနဖူးစည်းစာတမ်းတွေနဲ့ pop-up ကြော်ငြာပုံစံတွင်ကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးမျိုးစည်းကြပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ငါကြော်ငြာတွေဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်သလား? လုံးဝ။ ဒါဟာနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ကြော်ငြာ-ပိတ်ဆို့ခြင်း software ကိုအဘို့ဖြစ်၏။
ကြော်ငြာ blocker, စည်းကမ်းအဖြစ်နှစ်ခုအမျိုးအစားများနေသောခေါင်းစဉ်: ဘရောက်ဇာ၏ပုံစံအတွက်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်၏ပုံစံအတွက်-ons တွေကိုထည့်ပါ။ blocker တစ်ခုချင်းစီအမျိုးအစားက၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့သညျသငျလိုအတိအကျဘာကိုထွက်ကြိုဝေးကိုလျှော်ထားတဲ့အကြားလူကြိုက်အများဆုံးကြော်ငြာ blockers ၏စာရင်းကိုတင်ပြ။
, ဒီ tool ကို Google က Chrome ကို Mozilla Firefox ရဲ့, Yandex Browser ကိုနဲ့ Opera နဲ့တူထိုကဲ့သို့သောရေပန်းစားသော web browser များအဘို့အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ဘရောက်ဇာကို-based အဖြည့်, ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ဖြစ်ပါသည် - ကြော်ငြာ-blocking ဆော့ဖျဝဲများစာရင်းကိုလူကြိုက်အများဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်ဖွင့်လှစ်။
ဤ extension ကိုသင်လုံးဝနီးပါးမဆိုက်ဘ်ဆိုက်အရင်းအမြစ်ပေါ်မှာဖျက်သိမ်းရေး, ထိထိရောကျရောကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ နှင့်တစ်နေရာကြော်ငြာနှင့်တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းကိုဖမ်းလျှင်မူကား, သင်အမြဲဒီနေရာမှာ Adblock တိုးတက်လျက်ရှိသည်သစ်ကိုအလုပ်နှင့်အတူ update လုပ်ဖို့ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူကသတင်းပို့လို့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို Download လုပ်ပါ
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လိုဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို အသုံးပြု. VC ကိုအတွက်ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှား
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလုံခြုံရေးအတူတူကြီးမြတ်ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ tool ကို: ဒီနေရာမှာ Adblock Plus မတူဘဲ, Adguard သာဒီ function ကို support ကန့်သတ်မထား, ပြီးသားအင်တာနက်ပေါ်ရှိကြော်ငြာများ၏ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် full-စုံတဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာသင့်ကွန်ပျူတာကိုထိခိုက်စေခြင်းအလိုငှါသံသယဖြစ်ဖွယ်ဆိုဒ်များတစ်ဦးကိုမှန်မှန် updated ဒေတာဘေ့စပါရှိသည်။
Adguard အစီအစဉ်ကို Download လုပ်ပါ
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လို Adguard သုံးပြီး YouTube ပေါ်မှာကြော်ငြာတွေကို disable လုပ်ဖို့
ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုထိရောက်စွာအင်တာနက်ပေါ်ရှိ, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ပရိုဂရမ်အတွက်သာကြော်ငြာ combats ။ နှင့်သမိုင်းနှင့် cookies တွေကိုရှင်းလင်းအဖြစ်နောက်ထပ် features တွေထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များ, သင့် browser ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အထွေထွေအတွင်းကွန်ပျူတာကိုတိုးမြှင့်စေမည်။
AdFender အစီအစဉ်ကို Download လုပ်ပါ
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လို AdFender မှတဆင့်ကြော်ငြာ Odnoklassniki ဖယ်ရှားပစ်ရန်
နှစ်ခုသည်ယခင်အစီအစဉ်များ, ကြော်ငြာ Muncher မတူဘဲ - ကကြော်ငြာတွေနဲ့ pop-ups ပိတ်ဆို့ဖို့လုံးဝအခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင် browser မှာ, သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးအစီအစဉ်များအတွက်ကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအဓိကအသိပေးချက် - မျှော်လင့်မကြာမီဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မည်သည့်ရုရှားဘာသာစကား, များအတွက်ထောက်ခံမှုမရှိခြင်း။
ကြော်ငြာ Muncher Download
သင်ခန်းစာကို: ဘယ်လိုအစီအစဉ်ကိုကြော်ငြာ Muncher ၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်သင့်ကြော်ငြာကို disable လုပ်ဖို့
ထိုအသေးငယ်တဲ့ကောက်ချက်။ တစ်ခုချင်းစီကို tool ကဆောင်းပါးထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်, ထိရောက်စွာကွဲပြားခြားနားသော browser များအတွက်ကြော်ငြာနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ လျှင်ဥပမာ, ဒီနေရာမှာ Adblock Plus အားမရှိတော့သည်အခြားအစီအစဉ်များသည်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် features တွေအရာ၌ဝါကြွားနိုင်သောအပိုဆောင်း features တွေရပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: Windows 10 Clear Everything (အောက်တိုဘာလ 2019).